Dowladda Kenya oo markii ugu horreysay ka soo jawaabtay dalabkii DF Somaliya ee ku aadanaa Wasiir Janan | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dowladda Kenya oo markii ugu horreysay ka soo jawaabtay dalabkii DF Somaliya...
Nairobi (Halqaran.com) – Dowladda Kenya ayaa ka jawaabtay dalabkii ka yimid dowladda Federalka Soomaaliya ee ku saabsanaa in Kenya ay soo dhiibto Cabdirashiid Janan oo ah Wasiirka Amniga Maamulka Jubbaland.
Xoghayaha Wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, Macharia Kamau ayaa sheegay in Kenya aysan go’aamin karin in dowladda loo gacan geliyo Wasiir Janan.
Warbaahinta Kenya qaarkood, ayaa ku waramaysaa in Cabdirashiid Janan uu ku hoydo Hotel ku yaallo Magaalada Mandhera, islamarkaana ay ku illaaliyaan Ciidamada dalka Kenya.
Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, ayaa shalay lagu arkay duleedka Magaalada Beled Xaawo, isaga oo soo bandhigay cudud ciidan.
Hadalkaan kasoo yeeray Xoghayaha Wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, Macharia Kamau ayaa waxaa ay kusoo aadeysaa xilli todobaadkii hore dowladda Soomaaliya ay Kenya iyo Booliska Interpol ka dalbatay in la soo gacan galiyo Wasiir Janan.
jawaabtay dalabkii DF Somaliya
soo qabashadii Cabdirashiid Janan